Ahoana ny fanesorana ny doka: ny fomba rehetra sy ny toro-hevitra | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fanesorana ny adware
Ny fitaovantsika, toy ny solosaina na finday, matetika no iharan'ny loza sy fandrahonana isan-karazany. Amin'ny tranga maro dia mety viriosy na malware izany, saingy misy karazana hafa koa tsy maintsy dinihintsika. Ny iray izay fahita ankehitriny dia ny adware, izay efa henonao indraindray.
avy eo lazainay aminareo rehetra momba ny doka, mba hahafantaranao azy, ankoatry ny fomba ahafahantsika manafoana azy amin'ny solosaina na telefaona finday, raha sendra tratry ny aretina ianao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Zava-dehibe ny mitadidy ao an-tsaina, ka azo antoka fa hanampy anao izany.
1 Inona no atao hoe adware
2 Inona no hatao raha voan'ny aretina aho?
3 Ahoana ny fanesorana ny doka amin'ny fitaovana
3.1 Modely azo antoka
3.2 Format / Famerenana amin'ny laoniny ny ozinina
Inona no atao hoe adware
Izy io dia rindrambaiko tsy ilaina izay namboarina asehoy tsy tapaka ny doka eo amin'ny efijery. Amin'ny alàlan'ny fametrahana dokambarotra amin'ny solosaina na telefaonintsika dia ho hitantsika ny fisehoan'ny doka amin'ny fotoana rehetra. Raha ny solosaina dia matetika ao anaty «browser», indrindra fa izay ahitantsika ireo doka ireo. Amin'ny telefaona iray dia mety hitranga fa amin'ny app manokana izy io, nefa azo aseho amin'ny efijery finday ihany koa izy io.
Matetika, ny dokam-barotra dia mivoaka amin'ny fitaovana fakana tahaka ny rindrambaiko hafa na tafiditra ao anaty hafa. Izy io dia afaka misandoka ho fampiharana ara-dalàna na tafiditra ao anaty rindranasa ary mihazakazaka aorian'ny nametrahana azy amin'ny fitaovana resahina. Azontsika atao ny mametaka azy amin'ny alàlan'ny solosaina, tablette na smartphone.
Ny tanjon'ny doka dia ny mampiseho doka tsy tapaka. Amin'ny tranga sasany dia mety ho tafahoatra loatra izany ka amin'ny lafiny ara-dalàna tsy azo atao ny mampiasa an'io fitaovana io ary manao asa mahazatra. Ho fanampin'izay, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, tsy mety ireo doka ireo, miaraka amin'ny atiny lehibe na doka momba ny vokatra avy am-boalohany. Ny zavatra mahazatra dia zavatra mahasosotra azy io, saingy tsy miteraka loza mitatao amin'ny filaminan'ny mpampiasa izany. Io no mampiavaka azy lehibe indrindra amin'ny malware na spyware, ohatra.
Inona no hatao raha voan'ny aretina aho?
Azo atao izany nisintona fampiharana amin'ny solosainao na finday avo lenta ianao izay nivadika ho voan'ny dokambarotra. Amin'ity karazana toe-javatra ity dia mila mandray fepetra isika mba hisorohana ny olana tsy hiharatsy, ankoatry ny fahafahantsika mampiasa ilay fitaovana mahazatra indray amin'ity tranga ity. Soa ihany fa misy zavatra sasantsasany azontsika atao, toy ny fepetra hiarovantsika tena.
Mazava ho azy, tsy maintsy esorintsika amin'ny rindrambaiko ity adware ity, saingy alohan'ity dia tsara ny miaro ireo rakitra sy angon-drakitra ananantsika ao amin'ilay fitaovana voalaza, mba tsy ho very zavatra amin'ity lafiny ity isika. Ka raiso ny backupNa amin'ny solosainao na amin'ny telefaona findainao, ireo rakitra ireo dia zavatra azo antoka fa atoro anao. Ny fananana kopia nomaniny ho solon'izay dia hanampy antsika raha tsy mila mamolavola ilay fitaovana ho fepetra lehibe hanalana ny adware voalaza ao isika.
Manaraka, zava-dehibe ny andehanantsika tadiavo ny fangatahana resahina izay nampiditra adware toy izany tao amin'ilay fitaovana. Amin'ny tranga maro dia zavatra mora izany, satria hitantsika fa nanomboka niseho be loatra ny doka taorian'ny fametrahana ny fampiharana farany indrindra tamin'ny solosaina na telefaona. Amin'izay efa fantatsika ny antony amin'io lafiny io. Mampalahelo fa tsy dia tsotra foana izany.
Misy tranga izay ny dokam-barotra tsy manomboka miasa na mihetsika mandritra ny herinandro maromaro hatramin'ny nametrahana azy. Mety efa nametraka fampiharana bebe kokoa amin'ny solosainao na telefaonao ianao tamin'izany fotoana izany. Ka mety ho ilay tranga voalohany tsy fantatrao hoe inona no niavian'ity doka be loatra ity amin'ny fitaovanao. Na dia amin'ny tranga maro aza dia rindranasa napetraka vao tsy ela akory izay ary mety efa nanome olana ho anay. Raha ampidirintsika ao ihany koa izy ary feno doka dia efa fantatsika izay tokony hofongorantsika.
Ahoana ny fanesorana ny doka amin'ny fitaovana
Ny dingana voalohany, izay matetika mifarana amin'ny doka, dia ny fanesorana ilay application na programa voalaza. Efa hitanay ny solosaina nahatonga an'ity olana ity tamin'ny solosaina na telefaonantsika, ka tsy maintsy esorinay avy hatrany amin'ny fitaovana. Fepetra izay matetika miasa mba hamaranana ity olana ity amin'ny fitaovana, ka amin'ny tranga maro dia efa vita isika.
Raha voalaza fa maharitra ny fampiharana na manana olana hatrany isika dia afaka manararaotra programa izay manampy antsika hanala ny doka Amin'ilay fitaovana. Misy programa izay tena manampy amin'ireo toe-javatra ireo, toa an'i Malwarebytes, izay ahafahantsika manafoana ity karazana rindrambaiko manelingelina amin'ny solosainantsika ity, raha toa ka tsy vitantsika ny nanao azy. Ny ankamaroan'ireto programa ireto dia maimaim-poana na misy ny karama, fa amin'ny kinova fitsapana maimaimpoana, izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana rehetra. Ary koa ny antivirus mahazatra dia hanampy antsika amin'ity tranga ity hahafahana manafoana azy amin'ny solosaina. Amin'ny telefaona Android, ny Play Protect dia mety hanampy antsika amin'izany.
Modely azo antoka
Raha mbola tsy mandeha ny fizotrany, afaka mampiasa fomba azo antoka isika. Ny fanombohana ny fitaovantsika amin'ny maody azo antoka dia mitarika antsika amin'ny toe-javatra ahafahantsika manafoana ny fandrahonana amin'ny solosaina, dia tontolo mihidy izay ahafahantsika manao izany. Ka mety ho mendrika ny manomboka ny solosainao na ny findainao amin'ny fomba azo antoka, hanesorana ireo doka toy izany, raha toa ka tsy mandeha ireo dingana etsy ambony. Ahoana no anaovanao an'io:
Windows 10: Atsangano indray ny solosaina ary rehefa manomboka izy ary mivoaka ny efijery fanombohana, tazomy ny lakilen'ny Shift eo am-kitihana ny kisary herinaratra, mandra-pamerin'ny solo-sainanao indray. Rehefa mitranga izany dia kitiho ny safidy Troubleshoot ary avy eo mandehana any amin'ny Advanced options. Ao anatiny no ampidirantsika ny fanombohana Startup ary kitiho ny restart. Ao amin'ny efijery boot options, tsindrio ny lakile eo akaikin'ny Safe Mode miaraka amin'ny Networking. Amin'ny tranga maro dia matetika F5.
Android: Ny fomba azo antoka dia manomboka amin'ny fomba mitovy amin'ny telefaona Android amin'ny ankapobeny. Tazomy mandritra ny segondra vitsy ny bokotra herinaratra mandra-pisehoan'ny safidy eo amin'ny efijery ary manindry foana ny safidy hamono izahay mandritra ny segondra maromaro. Hisy hafatra iray milaza fa hanomboka amin'ny fomba azo antoka izy io, omentsika hanaiky izy ary miandry mandra-pahatongan'ny fomba azo antoka ao amin'ny Android.
Format / Famerenana amin'ny laoniny ny ozinina
Raha tsy nisy niasa tamin'ity raharaha ity, afaka mamolavola ilay fitaovana foana isika, ka esorina mandrakizay ao amin'ny solosaina ny doka. Ao amin'ny Windows 10 dia manana ny fahaizana mamolavola endrika tsy misy data very isika, izay tsy isalasalana fa manamora kokoa ity fizotrany ity. Saingy ny tolo-kevitra na ahoana na ahoana dia ny fanaovana kopia voafafa, mba hitranga.
Windows 10: Sokafy ny fikirakirana ny solosaina ary ampidiro ny Fanavaozana sy ny fiarovana. Mandehana any amin'ny faritra fanarenana ary tsindrio avy eo hamerina ity PC ity. Azonao atao ny misafidy eo amin'ny famolavolana nefa very angona na tsy mamafa ny angona, ampiasao ny safidy tianao ary araho ny dingana eo amin'ny efijery.
Android: Ampidiro ny toe-telefaona ary mankanesa ao amin'ny faritra System. Ampidiro ny faritra famerenana na famerenana ary safidio ny safidy hamerenana ny telefaona. Araho ny dingana voalaza eo amin'ny efijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ahoana ny fanesorana ny adware
Ahoana ny momba an'i Fortnite? Rahoviana no hiverina i Fortnite?
Getaround, mandeha amin'ny fiara fitaterana feno indrindra izahay